Hoggaamiyihii hore ee amniyaatka al-Shabaab, Zakariye Ismaaciil Axmed Xirsi, ayaa kooxda ugu baaqay in intay goori goor tahay ay dowladda isku dhiibaan.
Mar uu la hadlayay saxaafadda Muqdisho ayuu Zakariye sheegay in al-Shabaab ay burburtay, sidaa daraadeed waxaa la gaaray waqtigii dhalinyarada la soo qalday ay hubka dhigi lahaayeen, dadka iyo dowladdana ay cafis waydiisan lahaayeen. Waxuu sheegay in si fiican loola dhaqmay markii uu is dhiibay, sidaas si la mid ahna ay kuwa isi soo dhiiba ay ka filan karaan dadka iyo dowladda Soomaaliyeed.
Zakariye ayaa saraakiisha gobolka Gedo isku dhiibay dabayaaqadii bishii Diseembar. Waxuu ahaan jiray nin aad ugu dhow hoggaamiyihii hore ee al-Shabaab, Axmed Abdi Godane, oo bishii September ee sanadkii tagay weerar dhanka cirka ah lagu dilay, balse markii dambe waxuu ku biiray hoggaamiyeyaal mucaarad noqday kadib markii ay u muuqatay shaydaannimada Godane iyo arxan darrada ninkii badalay uu dadka ku hayo.
Ugaarsiga madaxda al-Shabaab ayaa wali socda. Dhowaan waxaa duqeyn dhanka cirka ah oo Diinsoor ka dhacday lagu dilay Yuusuf Dheeq oo kooxda u qaabilsanaa abaabulka dibadda, halka Axmed Ismaaciil Cali oo hoggaamiye sare ahaa lagu toogtay duleedka Garbahaarrey, Colow Barrow oo asna ka tirsanaa hoggaanka sare ee kooxdaas nolosha lagu soo qabtay kadib dagaal ka dhacay degaanka Fiidow ee gobolka Shabeellada Hoose.
Argagixisada al-Shabaabka oo dharbaaxo kulul kala kulmay ciidamada dowladda
Dhawr dersin oo ka tirsan argagixisada al-Shabaab ayaa lagu laayay duqeymo dhanka cirka ah oo dhowaan ka dhacay deeganno ka tirsan Jubbada Hoose, halka boqolaal kale lagu dilay hawlgallo ka dhacay gobolka Hiiraan. soddomeeyo ka tirsan Kooxda Alshabaab.
Taliyaha howlgalladda ciidanka maamulka Jubbaland Korneyl Maxamed Sheekh Cabdi ayaa sheegay in weerarada cirka lala beegsaday xarumo ay Shabaabku ku lahaayeen deegaannada Buula-gaduud, Yoontooy, Qaanqaan, Jamaame iyo degmada Jilib ee gobolka Jubbada Hoose. Waxuu intaas ku daray in weerarada cirka kadib ay ciidamada dowladdu duullaan dhulka ah ku qaadeen goobahaas, iyagoo gaadiidka dagaalka iyo sahaydii cadowga cagta mariyay.
Dhanka kale, ciidanka dowladda ayaa maanta la wareegay gacan ku heynta tuulada Abooreey oo 30 KM dhanka Waqooyi-bari ugu beegan degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan. Ciidanka Xoogga Dalka ayaa dagaal la’aan la wareegeen tuulada kadib markii xooxda al-Shabaab ay goobta ka carartay. Dadka degaanka ayaa si weyn u soo dhoweeyay ciidamada, waddooyinka degaankana waa la isku furay. Wadada weyn ayaa waxaa ku xannibnaa gaadiid raashiin u waday Buuloburte.
Shabaabka ayaa caadeystay in ay jidgooyo hantida dadka lagu boobayo dhigtaan laakiin ciidamada ayaa iyagana cunaha u galay oo goob walba ka ceyriya. Goobo aad u badan ayaa laga saaray argagixisada tan iyo markii la bilaabay hawlgallada argagixisada dalka looga saarayo.
Nin Shabaab ah oo sidii dumarka u labisan oo lagu qabtay Kismaayo
Ciidanka nabad sugidda maamulka KMG ah ee Jubba ayaa howgal ay ka sameeyeen xaafadda dalxiiska ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose kusoo qabtay nin la sheegay inuu ka labisnaa dharka dumarka.
Taliye ku xigeenka nabad sugidda magaalada Kismaayo Axmed Cabdullahi Ciise ayaa sheegay in ninka ay ku hayaan saldhigga, islamarkaana ay baaritaan ku wadaan. Ninkan dhalinyarada ah ayaa sheegay in Kooxda Alshabaab ay soo dirtay oo uu ahaa tijaabo bal inuu magaalada dhex mari karo oo isagoo aan la garan oo dilal geysan karo.
Maalmo ka hor ayaa magaalada Xamar waxaa laga qabtay nin sidan oo kale soo labistey dharka dumarka, markii la qabtayna qirtay in ay soo direen Shabaabku oo iyagu had iyo goor u taagan dhuumaaleysi iyo dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed.
Kooxda al-Shabaab ayaa dhaqan xumo tii ugu liidatay ka dhaxashay Amiirkoodi geeriyooday ee Axmed Godane oo isagu dharka dumarka ku lebisan jiray. Waa dhaqan ka soo horjeedo Shareecada Islaamka isla markaasina lagu doonayo in lagu ceebeeyo diinta islamka iyo xijaabka gabdhaha Muslimiinta ah, waana mashruuc ay soo abaabuleen dad cadow ku ah Islaamka.
Argagixisada arxanka daran oo wali dhibaato ku haya shacabka
Kadib markii goobaha dagaalka si weyn loogu jabiyay ayay argagixisada arxanka darani waxay bilaabeen in ay ciilkooda kula kor dhacaan shacabka aan waxba galabsan.
Tacaddiyadii ugu dambeeyay ee ay argagixisadu shacabka u geysato ayaa waxaa ka mid ah dilka dhawr dumar oo ku nool degmada Jilib, gobolka Jubbada Dhexe, dhaca xool oo ay ka geysteen degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, iyo afduub loo geystay xoolaley iyo beeraley ku dhaqan degaanka Goof-gaduud ee gobolka Baay.
Qaraabada dumarka lagu laayay Jilib ayaa saxaafadda u sheegay in Shabaabku ay xaqdarro ku dileen gabdhahaas, iyaga iyo ciddii dilkaas su’aal ka keentana la handaday. Dhanka kale, shacabka Badhaadhe ayaa ku eedeeyay al-Shabaab inay 150 neef oo isugu jira ari iyo lo’ ay si khasab ah uga qaadatay dad reer guuraa ah oo ku nool degmadaas, qaar ka mid ah dadkii xoolahaas lahaana ay xirtay.
Dhacdadaas mid la mid ah ayaa laga soo sheegay degaanka Goof-gaduud ee gobolka Bay. Shacabka halkaas ku dhaqan ayaa sheegaya in 43 ruux oo dadka degaanka ah ay Shabaabku afduubteen, ruux walbana la waydiistay in lagu soo daayo 500 oo doolar, taas oo ah lacag aysan dadka degaanku awoodin.
Shabaabku dhibka shacabka wali waa wadaan, balse waxaa dadka loogu bishaareynayaa in mar aan dheereyn argagixisadaas arxanka daran dalkoo dhan laga wada xorreyn doono.